Ungayenza kanjani indoda ithandane ne-WhatsApp | Amadoda anesitayela
Ungayenza kanjani indoda ithandane ne-WhatsApp
U-Alicia tomero | 14/11/2021 22:32 | Izithandani Nezocansi, Ubuchwepheshe
I-WhatsApp isibe enye yamanethiwekhi omphakathi asetshenziswa kakhulu futhi usinika ilungelo lokukwazi ukuxhumana nabantu esisanda kuhlangana nabo. Uma futhi ufuna ukuya phambili kakhulu, lolu hlelo lokusebenza ikuvumela ukuthi unqobe lowo muntu ukuthi uthanda futhi ukwazi ukuba nobudlelwano obufunayo.
Uma ungenalo ulwazi oluningi ekuthumeleni imilayezo noma ungazi ukuthi usabele kanjani, singakunikeza amathiphu noma okhiye ukuze ukwazi nqoba leya ndoda oyithandayo. Akumele futhi ube umuntu ohlukile, kodwa kufanele uzame ukuthi ungabi ngumuntu oyengayo, oyekelelayo noma onganaki. Vele ube ngempumelelo ukuze gcina ibhalansi oyithandayo.
1 Ungayenza kanjani indoda ithandane ne-WhatsApp?
1.1 Kuthatha isikhathi ukuthumela impendulo
1.2 Kufanele kube kanjani imiyalezo?
1.3 Gcina imfihlakalo uze uhlangane mathupha
1.4 Kuthiwani ngama-emoji?
1.5 Ungalokothi ucele izincazelo
1.6 Yiba nesithakazelo kuye, kodwa ngaphandle kokumkhuza
1.7 Bonisa ubuntu bakho njengoba unjalo
Ungayenza kanjani indoda ithandane ne-WhatsApp?
Ukuze ukwazi ukukhuluma ngalolu hlelo lokusebenza kubalulekile ube nenombolo yocingo yomunye umuntu. Ukunikeza inombolo kusho ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uhlobo oluthile lokuxhumana luzosungulwa, futhi ikakhulukazi, nge-WhatsApp. Uma kunjalo, kungenxa yokuthi omunye umuntu unentshisekelo kuwe futhi ngokuqinisekile uzobe ulindele lolo hlobo lokuxhumana.
Kuthatha isikhathi ukuthumela impendulo
Uma kunguye othathe isinyathelo sokuqala sokukubhalela, sebenzisa ithuluzi elicashile loku zinike isikhathi sokuphendula. Siyazi ukuthi uzovuma ukusho okuthile, kodwa awukwazi ukuvela njengowesifazane ophelelwe yithemba. Uma umngenisa imisiwe isikhathi eside, ngokuqinisekile ngifuna ukukunaka futhi ngikufune ngomunye umlayezo.
Uma, ngakolunye uhlangothi, kunguwe othumele umlayezo wokuqala, kufanele uzibonise unomusa, kodwa ongenandaba. Kufanele uqaphele ukuthi awuyena owesifazane ozinikele kakhulu okokuqala nokuthi awulindi usuku lonke ukuze ubone imilayezo yabo.
Kufanele kube kanjani imiyalezo?
Imilayezo kufanele ibe ecacile futhi ejabule. Ungeqisi ngezincazelo ezinde kakhulu, amadoda awathandi ukufunda into ende. Ungathola ukunaka kwabo ngokubhala imisho emifushane, ukuthi banesizinda futhi bayancomeka lapho bezifunda. Ukuthinta okuhlekisayo nge-feat encane ehlekisayo nakho kuzomjabulisa kakhulu.
Bathanda ukuba nengxoxo ejabulisayo, hhayi ukuthi ubatshele ukuthi usuku lwakho luhambe kabi futhi ungabi nenhliziyo. Okungcono kakhulu kukhona imiyalezo ezenzakalelayo kanye nemiyalezo Futhi qaphela ngokuthumela ama-meme noma amavidiyo ahlekisayo, mhlawumbe akakawaqondi amahlaya akho okwamanje.
Gcina imfihlakalo uze uhlangane mathupha
Unganikezi izikhiye eziningi zokuthi unjani, noma uthumele izithombe uma ezicela. Ngisho nangaphezulu uma ekucela ukuthi uzilolonge ukuthumela imiyalezo, ngoba into ayifunayo ukuphakamisa i-ego yakhe ngesithombe somzimba wakho unqunu. Uma ungenakho ukuzethemba kakhulu ungangeni kumkhuba wokuthumela izithombe uma ungamazi ngempela. Ngeke wazi ukuthi ungasisebenzisa kanjani isithombe sakho ezinkundleni zokuxhumana.
Ziyizethulo zemizwa yethu kanye zijabulisa futhi ziyasebenza. Kodwa ungawasebenzisi kakhulu, kunganikeza umuzwa wokuba yingane. Gcina ezinye ngezikhathi ezithile ukuze umusho ungabi buthuntu lapho uwubhala. Ama-Emoji ukusiza ukuveza imizwelo yalowo musho obuwudlulisa, kodwa ngendlela ethile kuphela.
Ungalokothi ucele izincazelo
Uma kubuhlungu ukuthi kuthatha isikhathi ukuphendula noma kungaqedi ukuxhumana nemiyalezo, ungalilahli ithemba. Gcina ukuma kwakho ekulindile futhi ungamshayi ngemiyalezo yokukunikeza izincazelo. Amadoda amaningi athatha isikhathi sawo ukuphendula kanti owesifazane ojahile angakwehlula. Ucabanga ukuthi uzihlalele nje noma udlala ngemizwa yakho? Lapho ungabaza ungapheli amandla,alinde athule. Imininingwane kuphela ezokunikeza uhlobo lomuntu ayilo nokuthi ubonisa ngaziphi izinhloso zothando.
Yiba nesithakazelo kuye, kodwa ngaphandle kokumkhuza
Sonke sithanda ukulalelwa nokuthi zihlobene nemizwa yethu. Abesilisa bangakwazi ukungena ngaphakathi uma kuziwa ekutsheleni usuku lwabo nosuku, noma ukuthi bazizwa kanjani ngaphandle kokunye, ikakhulukazi lapho kungekho ukuzethemba okukhulu. Uma ehlongoza ukukutshela okuthile, mlalele, babonga kakhulu uma kukhona owesifazane osizayo ukubanikeza iseluleko.
Bonisa ubuntu bakho njengoba unjalo
Lesi kuhlale kuyiseluleko esishiwo kuzo zonke iziqalo zokukhangwa okuncane noma uthando. Ungazenzi omunye uhlobo lomuntu ngoba ekugcineni ingatholakala. Thola inguqulo yakho ehamba phambili futhi umhlabe umxhwele kancane kancane, okungenani kuze kube usuku lwakho lokuqala. Okufanayo kuya ezithombeni, ungazami ukunqoba ngesithombe esithinteke kakhulu, zibonise njengemvelo ngangokunokwenzeka.
Futhi ngaphezu kwakho konke funda ukuvalelisa bese usho kahle uma ungakhombisi intshisekelo enkulu. Ungalokhu uzama ukuthola into engadlidlizi ngakwesokunene sakho, mhlawumbe indoda ebidinga umuntu wokuyikhava. ukuntula ngokomzwelo futhi andise ego yakho. Ngakho-ke, kufanele uhlukanise le mibono ukuze unganikezi konke.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Izithandani Nezocansi » Ungayenza kanjani indoda ithandane ne-WhatsApp